Izintaba ze-Boiler Giant nesibhakabhaka sasebusuku
I-boiler (i-Kesselkoppe ngesiJalimane) iyisiqongo esiphakeme esisezintabeni eziphakeme zaseCzech zezintaba zaseGiant. Itholakala engxenyeni yabo esentshonalanga esifundeni saseSemily esifundeni saseLeberec, inani eliphakeme kakhulu laso. Ukuphakama kwamamitha ayi-1435 ngaphezu kolwandle kwenza kube yintaba ye-10th ephakeme kakhulu eCzech Republic. Esikhathini esedlule lalibizwa ngeKrkonoše neKokrháč. Yintaba etholakala kumakhilomitha ayi-5 empumalanga ukusuka endaweni edumile yasendaweni yaseRokytnice nad Jizerou. Kukhona ezinye iziqongo ezibalulekile endaweni ezungezile, njengeLysá hora (1344 m), Amatshe aseHarrach's Stones (1421 m) noma iVlčí Ridge (1140 m). Ngasohlangothini oluseningizimu-mpumalanga luzungezwe i-Little and Large Boiler Pit, evame ukubekwa engozini ngama-avalanches ebusika. Njengazo zonke izintaba zeGiant, ibhulashi lalingiswa imibimbi kaHercynian futhi lenziwa ikakhulu nge-mica.
kubhayela Mountains nebe noc iqhwa ebusika
Amathegi: kubhayela Mountains nebe noc iqhwa ebusika
Indawo: I-Kotel, i-512 38 Vítkovice, Czech Republic